Qaab darada Qoriga !!!!!!
Mar hadda laga joogo lix bilood ayeey maskaxdayda ku gaagaxatay waxa na dhibay haddaanu nahay Soomaali oo ah qoriga na naafeeyay loona kasbiyay masiibo taxani ah sida kumanaanka ubad ee agoomoobay ,dumarkana weer cad loo xiray ,baada baahday ,noolasha qiimo -beeshay, qafaalka iyo boobka mur-qaawanka ah oo loo aaneeyo inuuqoriga keenay, oo aan marnaba loo xiribo taageyn oo waxaa macquul ah qoriga iskiis
ma dhaco ee dadbaa far wax ku gujiya manala doono in fal-xumada la qaato.
Markii ugu horaysay aan qori arkey waxaa laga jooga dhowr iyo sooddan sano markaas anoo hooyadeey uu raacay xabsi uu abtigay markaas ku xirnaa oo sitimaankiiba mar qura ayaa loo ogolaa in raashinka dibada laga keeno marka raashinka la keenana waa la baaraa oo marar qaarkood waxaa laguqu qasbaa inaad dhadhamisid oo aniga waxaan xasuustaa markaanu tagnay irida hore ee xabsiga inaan arkey nin qori cabeesan oo baynaad leh gaarna ah markaan arkayna cabsi ayaan la jareeyay oo waxaan niyada ka iri ala yaa meesha kaa kaxeeyo markaas garwaaqsaday qaab-darrada qoriga .
Dabayaaqadii 1978kiina waxaan nasiib uu yeeshay inaan qori gacanta ku dhigo iyadoo markaas aheyd tababar aan markaas aan xalane aan ugu jiray ,in badana aan ku gaardiyay qori aan xabad lahayn iyo layliskii sanbaloollshe.
Dabcan marxalada Soomaaliya maanta ka jirtaa ka duwan tii hore oo waxaa qoriga lagu arkaa meelkasto waxaan ka ahayn masaajid ha noqoto rugta-ganacsi, baabuur magaalooyinka isaga dhex-goosha, xerooyinka samafalka, biibitooyinka, shaneemooyinka hortooda, dariiqayada , hooteelada, bushashka qaadka iyo meelo kale.
Qoriga dhibkiisu ma yaro mana aha wax la soo kobi-karo , qatartiisana waa mid waa midaan la iska daga tiri-karin oo qorikasto la sito qudhbaa baxdo